“Salaadiintii Markii La Halgamayay Wanka, Wiilka Iyo Qoriga Isku Soo Darayay Ayaa La Odhan Xabsiga Liinta Ku Caba Uma Daban,” Xildhibaan Cali Aareeye |
“Salaadiintii Markii La Halgamayay Wanka, Wiilka Iyo Qoriga Isku Soo Darayay Ayaa La Odhan Xabsiga Liinta Ku Caba Uma Daban,” Xildhibaan Cali Aareeye
Hargeysa(GNN)Xildhibaan Cali Aareeye, oo ka tirsan mudaneyaasha wakiillada, kana tirsan xisbiga Waddani, ayaa ayaan darro ku tilmaamay xadhiga suxufiyiinta iyo madaxdhaqameedka ee xukumaddu beegsanaysay maalmihii u dambeeyay.
Waxa uu sheegay in xaalka dalku marayo meel aan dawladdu si haboon u maamulayn “Xaaladda dalka Alle ha inoo sahlo ayaan leeyahay, oo waxaad is odhanaysaa waddanka cid kale oo inaga ahayn ayaa ilaalinaysa,” ayuu yidhi xildhibaanka oo ka hadlaya xaaladda guud ee Somaliland.
“Dadka reer Somaliland oo dad qalbi fiican ah oo aan cuqdad lahayn oo qalbi xaadhan ayuu Illaahay inoogu naxariistayaa ayaad is odhanaysaa laakiin, dawlad wax ilaalinaysa ma jirto. Kala dambeyn la’aan baa dalka jirta. Dawladdii meel ay ku maqan tahay ma garanayo, wayna is wada haysataa, mid mid ixtiraamayaana ma jirto,” ayuu yidhi XIldhibaanku
Waxa uu sidoo kale ka hadlay xadhiga Salaadiinta iyo madaxdhaqameedka “ Runtii waxa kale oo nasiib darro ah raggii biri ma gaydada ahaa Salaadiintii, boqoradii, cuqaashii nimankii dalka sharafta ka mudnaa ee soo halgamay ee shalay markii la halgamayay Nin kasta oo caaqil ahi Wanka, Wiilka iyo Qoriga isku soo darayay ayaa la odhan xabsiga Liinta ku caba waa mid aanan daban.
Waxa kale oo yaab ah, wariyeyaasha oo Somaliland buun-buuniyay oo meel sare gaadhsiiyay oo meel aanay gaadheen gaadhsiiyay in iyagana kii wax duubaba la leeyahay jeelka liinta ku cab. Waxay taagan tahay maanta afkiibaa juuqda gabay,” ayuu yidhi xildhibaan Cali Aareeye oo Startv la hadlay.
Xildhibaan Cali Aareeye, waxa uu sheegay in golahoodu marayo xaalad adag “Mooshinkii cishadii dhawayd ee Haamaha waad ogaydeen wixii dhacay. Waxa jiray nin gacanta nala taagay oo in la wareejiyo haamaha diidanaa, oo markii dambe Illaahay uun baa asturay iyo wixii golaha ka dhacaye(Feedhkii) xoggaa dhadhamo ah la soo siiyay, xaggan Itoobiya waxaa ka dhacday Nin baa Kiniisadda gala maalinta hilib badan lagu qalo oo ka soo dherga, maalinta Masjidka mawliid lagu samaynayana wuu ka soo dhergaa.
Ninkii waxaa lagu yidhi waar hebelow diinteed adigu haysataa horta? Wuxuu yidhi kolba diinta Hilib badan uun baan raacaa. Markaa waxaan leeyahay qoladayada xildhibaannada waa meesha hilib badan uun ha raacinee meesha dalka iyo dadka u dana raaca,” ayuu yidhi Xildhibaan Aareeye.
Waxa uu ugu dambeyn farriin u diray Madaxweyne Siilaanyo “Duqa Axmed haddii talo gacanta ugu jirto, wax badan inuu qabto waa looga fadhiyaa labada sanno ee loo kordhiyay,” ayuu yidhi Mr Aareeye.